Qubanaha » Cabadikariin Guuleed oo muqdisho ku laabtay wajigabaxna kala kulmay odayaasha deegaanka.
Cabadikariin Guuleed oo muqdisho ku laabtay wajigabaxna kala kulmay odayaasha deegaanka.
Madaxweynaha Xilkiisa Muranka ku jira C/kariin Xuseen Guuleed ayaa gowrdhaweyd ka dhoofay garoonka Diyaradaha ee Magalada Caadaado kadib kulamo aan waxba ka soobxin markii uu la yeeshay Odaayl ubadan reer Cadaado.
Madaxweyne Guuleed oo dhawaan ay xilka ka qaadeen xubno 54 xildhibaan oo ka tirsan barlamanka Galmudug ayaa waxaa hada uu jiraa xaaladii ugu xumeyd ,iyadoo uu na shalay xilka ka qaaday wasiirkii arimaha gudaha Dolwad goboleedka galmudug sabab aan la cadeynin.
Xildhibaan Faysal Axmed Cabdulle oo ka tirsan Xildhibanada Barlamanka galmudug oo sigaoo cadaado ku sugan la hadlayey warbaahinta Qubanaha.net ,ayaa waxaa uu ka waramay sida hada wax u socdaan isagoona sheegay in uu Cabdirakariin Guleed uu ka dhafooay cadaado isagoo uu xaalka ku xunyahay odayashii deegaankana uu kala kulmay waji gabax .
”’waxaan aad ugu xunnahay in uu C/kariin guuleed oo aan xilka ka qaadnay in uu u adeegsado Xubnaha Barlamanka Galmudug oo shiraya ciidan hubeysan taasi oo sharciga iyo qawaaniinta caalamiga ah aan waafaqsaneyn islamarkaasina aan loodulqaadankarin ”’ayuu yiri Xildhibaan Faysal.